Muuri News Network » XOG: Ethiopian-ka Jooga Baydhabo oo bilaabay Qorshe aad looga Yaaban yahay..
XOG: Ethiopian-ka Jooga Baydhabo oo bilaabay Qorshe aad looga Yaaban yahay..
Nov 9, 2015 - Comments off
Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay Wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in Saraakiisha Ciidamada Ethiopia ee halkaasi ka howlgala ay wadaan qorsho ay ku hantinayaan Siyaasada Maamulka Koonfur galbeed ee Somalia.
Dowlada Ethiopia oo Siyaasad gaar ah ka damacsan Gobolada uu ka arrimiyo Maamulka Shariif Xassan ayaa iminka la sheegayaa in talaabadeedii ugu horeysay ay noqotay in 200 oo dhalinyaro Somali-Ethioipa ah ay ka dajisay Baydhabo.
Qorshaha dhalinyaradaasi loo geeyay Baydhabo ayaa ah in laga dhigo Ciidamada Booliska ee dhawaan loo tababaraayo Maamulka Koonfur Galbeed, si ay Ethiopia u hantiso amaanka iyo Siyaasada Goboladaasi.
Dhalinyarada ay Dowlada Ethiopia iminka geysay Baydhabo ayaa la tilmaamayaa in 3 asbuuc ka hor lagu diiwaan galiyay Magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Ciidamada Booliska ee la doonaayo in lagu biiriyo kuwa hadda la geeyay Baydhabo ayaa waxa uu qorshuhu yahay in loo kala qeybiyo Xarumaha ugu waaweyn Maamulka si ay ula socdaan xaalada amaan ee xarumahaasi.